कोरोना भाइरस संक्रमणका समयमा गुर्जोको सेवन कति फाइदाजनक ? गुर्जोको सेवनले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि – Sanchar Patrika
कोरोना भाइरस संक्रमणका समयमा गुर्जोको सेवन कति फाइदाजनक ? गुर्जोको सेवनले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि
August 19, 2020 204
चाणक्य नीतिदर्णपको अध्याय ९ को चौथो श्लोकमा चाणक्यले भनेका छन् ।
अर्थात सवै औषधिहरुमा गुर्जो मुख्य छ । सबै सुखहरुमा भोजन मुख्य छ । सबै ईन्द्रियहरुमा आँखा श्रेष्ठ छ । सबै शरीरमा शिर(टाउको) प्रधान छ ।हाम्रो गाँउ घरमा पाईने गुर्जो (एक प्रकारको लहरा) जसको सेवनले सवै प्रकारको रोगहरुलाई निको पार्ने वा शरीरमा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि गर्ने कुरा चाणक्यले उल्लेख गरेका छन् ।
औषधीय गुणले भरिपूर्ण यो लहरा नेपाली ग्रामीण भेगमा ज्योरो, रुघाखोकी र चिसोमा लाग्ने बाथ लगायत अन्य धेरै रोगको औषधिको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । साथै बिभिन्न खालको एलर्जी,चर्मरोग, पेट रोगमा रामवाण मानिन्छ ।
संस्कृतमा गिलोयसत्वा भनेर चिनिने यसको वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया हो ।
कलमपित्त तथा कलेजो सम्बन्धी समस्यासँगै भाईरसको सङ्क्रमणविरुद्ध गुर्जोले लड्न सक्ने उनको भनाई छ । नेपालको जुनसुकै वातावरणमा यो लहरा हुन्छ वा खेतीगर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरि वनस्पति विज्ञ प्रोफेसर डा. प्रमोदकुमार झाले पनि नेपालमा पाईने गुर्जोको सेवनगर्न सुझाव दिने गरेका छन् । उनका अनुसार गुर्जोमा औषधीय गुणको टिनोस्पोरिन, टिनोस्पाराएड, कर्डिफोलाईड्स, कर्डिफोला, पिक्रोटिन, बरजेनिनलगायतका विभिन्न खाले बहुउपयोगि रासायनिकतत्व पाईन्छन् ।
Prevआफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने ६ सुत्र, के भन्छ अध्ययन ?
Next‘कोरोनाले विकराल अवस्था आउनसक्ने देखिएपछि उपत्यकामा निषेधाज्ञाको निर्णय’
जब अभिनेता अनुपम खेरले खुसि हुँदै अमेरिकामा नेपालीलाई भेटे र बनाए यस्तो भिडियो
दूधका बाेतलबाट सडकमा कालाेपत्रे : हुन्छ यस्तो टिकाउ